Imiphumo yezempilo yezilwanyana ezingamanyala kunye nokuziphatha okubi Umvuzo weZiseko
Iingcali zonyango zibika inani elikhulayo leengxaki zengqondo kunye ne-neuro-uphuhliso kubantu abaselula namhlanje. Uphando oluninzi lujolise kwifuthe lokusebenzisana ngokunyanisekileyo ne-intanethi kwimpilo yengqondo. Oku kwakungekho kuphela ukudlala kwe-intanethi kunye nokugembula, kodwa kunye ne-intanethi ye-intanethi. Funda kabanzi malunga neengxoxo zoNcedo lweZiseko zootitshala bezempilo.
Iimpawu zezempilo ezijongene noonografi zichaphazela ngakumbi abantu. U papashwe kutshanje Review Love et al. ithi
"Ngokubhekiselele kumlutha we-intanethi, uphando lwe-neuroscience luxhasa ukucinga ukuba iinkqubo ze-neural zihambelana nokuxhatshazwa kweziyobisi."
Iindaba ezilungileyo kukuba ngokuqonda okungcono indlela ubuchopho butshintsha ngayo malunga namava, abantu abaninzi banokubuyiselwa.
Isiseko soMvuzo sazisa ngeendlela ezininzi zokuphila kwethu ezinokuthi ziphenjelelwe kukusetyenziswa kwe-intanethi ngakumbi i-intanethi. Ukusebenzisa i-Intanethi iphonografi kungayitshintsha ingqondo, kuguqule umzimba womntu kwaye kukhokelele abantu ukuba bahlakulele ingxaki yokuziphatha ngokwesondo kubandakanya ukubakho. Ukubeka ngokulula, iphonografi ichaphazela impilo.
Sikwabonelela ngeendidi zeZibonelelo zokuxhasa ukuqonda kwakho ngemicimbi yezempilo. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi malunga neworkshop yethu yeengcali ngezobisi Apha.